बोलिभियन र ब्राजिलियन तस्कर ठमेलमा भेटिए, १० कराेडकाे कोकिन भेटिएन - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
बोलिभियन र ब्राजिलियन तस्कर ठमेलमा भेटिए, १० कराेडकाे कोकिन भेटिएन
दीपक खरेल काठमाडौं बैशाख १९
एक जना प्रहरी अधिकारीका अनुसार ब्राजिलकी युवती बयानका क्रममा त्रसित देखिएकी थिइन् र उनी थर्रथर्र कामेकी थिइन्।
प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्यूरोका अधिकारीलाई फागुन दोस्रो साता एउटा सूचना आयो। लागू औषध नियन्त्रणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको सदस्य संस्थाबाट आएको सो सूचना आधिकारिक थियो।
सो सूचनामा भनिएको थियो, ‘बोलिभियाका ६४ वर्षीय बृद्ध र ब्राजिलकी ३३ वर्षीय युवती साढे ४ किलो कोकिन बोकेर काठमाडौं आउँदैछन्।’
उनीहरुको उडान नम्बर, पहिचान खुल्ने फोटो तथा पासपोर्टको डिजिटल कपी प्रहरीले पहिल्यै पाएको थियो। सूचनाअनुसार २०७५ फागुन १७ दिउँसो दुबै जना त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने उल्लेख थियो।
लागू औषधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट प्राप्त सूचनाअनुसार नै सो मिति र समयमा बोलिभियन नागरिक ६४ वर्षीय जुनकार्लोस बारबेरी फेरिएर (राहदानी नम्बर १६९१३११) र ३३ वर्षीय ब्राजिलियन फरनन्दा मारिया आर ओर्डीजिउस डु नासीमेन्टो (राहदानी नम्बर वाईसी ९३१७८५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भए।
अध्यागमन विभागको रेकर्डअनुसार फरनन्दा अपरान्ह ३ः१८ बजे र जुन ३ः२० बजे नेपाल प्रवेश गरे। यतिबेलासम्म उनीहरु लागूऔषध कोकिन बोकेर आउँदैछन् भन्ने सूचना विमानस्थलमै खटिएका प्रहरी ब्यूरो अधिकारीसम्म पुगिसकेको थियो।
तर त्यहाँ उनीहरुलाई कसैले रोकेन। चेकजाँच गरेन। विमानस्थलमा खटिएका तालिम प्राप्त प्रहरी कुकुरले समेत उनीहरुलाई सुँघेनन्। सुरक्षा निकायका दर्जनौं व्यक्तिहरू बीचबाटै निस्केर उनीहरु पूर्व निर्धारित योजनाअनुसार सबै काम फत्ते गर्न सफल भए। त्यसपछि सिधै ठमेल पुगे।
सम्पूर्ण पूर्व सूचना पाएर पनि ब्यूरोले उनीहरुलाई कोकिनसहित भेट्न असफल भएपछि स्थिति गम्भीर भयो। ब्यूरोले घटना अनुसन्धानका लागि तत्कालै डिएसपी चक्रराज जोशीलाई फिल्डमा खटायो। उनी ठमेल पुगे।
उनी पुग्दा दुबैले पहिलो रात बसेको होटल परिवर्तन गरेर अन्तै गइसकेका थिए। अर्को होटल मण्डलामा दुबै भेटिए। जोशीको टोलीले दुबैलाई अलग–अलग राखेर बयान लियो। उनीहरुका सरसामान खानतलासी गर्यो। तर त्यहाँ केही भेटिएन। घटनास्थलमा खटिएका एक प्रहरीका अनुसार ब्राजिलकी युवती बयानका क्रममा त्रसित देखिएकी थिइन्। उनी थर्रथर्र कामेकी थिइन्।
नेपाल आएका बोलिभियाका पुरुष र ब्राजिलकी महिला १३ दिन नेपाल बसेर फर्किएका छन्। तर पूर्व सूचना पाएर साढे ४ किलो कोकिन बरामद गर्न नसकेको विषय प्रहरीमा पेचिलो बनिरहेको छ।
सूचना गलत कि प्रहरी लापरवाही?
लागूऔषधको अवैध उत्पादन, ओसारपसार र कारोबार रोक्न विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरुको चासो रहँदै आएको छ। यसका लागि उनीहरुले वर्षेनी अर्बौं डलर खर्च गरिरहेका छन्। ल्याटिन अमेरिकी देशहरु लागू औषध कारोबारको हिसाबले खुकुलो मानिन्छन्। त्यहाँ पक्राउ र कारवाही चलाउन अप्ठ्यारो छ। तर ती देशबाट आवात–जावत गर्नेहरुमा लागू औषधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सदस्यहरुले निगरानी राखिरहेका हुन्छन्। त्यहाँबाट बाहिरिने लागूऔषधका विषयमा नियमित सूचना अन्य देशका प्रहरीलाई दिने गर्छन्।
यसअघि पनि नेपाल प्रहरीले त्यस्तो सूचनाका आधारमा थुप्रै अप्रेसन सफल पारेको छ।
‘व्यक्तिगत सम्बन्ध र विश्वासका आधारमा सूचना आउने हो’, डेढ दशक ब्यूरोमा बिताएका अवकाशप्राप्त डिआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘यसरी आउने सूचना फेल भएका घटना अति न्यून छन्।’
कहाँ गयो कोकिन?
‘हामीलाई विभिन्न सूचनाहरु आइरहेका छन्’, ब्युरोका डिआईजी दिनेश अमात्यले मंगलबार नेपालखबरसँग भने, ‘अहिले पनि हामी केही सूचना फलोअप गर्दैछौं।’
मार्च ५ सम्म आफु तालिममा देश बाहिर रहेकाले त्यसअघिका घटनाका विषयमा जानकारी नभएको उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट पाएको सूचनाअनुसारको साढे ४ केजी कोकिन भने प्रहरीले अझै भेट्न सकेको छैन।
ब्यूरोका अधिकारीहरु पूर्व सूचनाअनुसार अराइभल टाइममा पुग्न केही ढिलो भएको स्वीकार्छन्। सूचनालाई सही ढंगले पच्छयाउन नसक्दा कोकिन बोकेर आएकाहरुले नेपाली सम्पर्क व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरिसकेको स्रोतहरुको दावी छ।
‘सूचनाको आधिकारिकतामा शंका छैन’, ब्यूरोकै एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘आएको सूचनालाई क्यास गर्न नसकिएको हो कि?’
अन्तराष्ट्रिय बजारमा एक ग्राम काेकिनकाे मूल्य २० हजार रूपैया भन्दा बढि छ। साढे ४ केजी काेकिन १० कराेड रूपैया हाराहारीकाे थियाे।
६४ वर्षीय जुनकी ३३ वर्षीय प्रेमिका
बोलिभियन नागरिक ६४ वर्षीय जुन कार्लोस बारबेरी फेरिएर साढे ४ महिना अन्तरमा दोस्रो पटक नेपाल आएका हुन्। अध्यामगनको रेर्कडअनुसार उनी २६ कार्तिक २०७५ मा नेपाल प्रवेश गरेका थिए। त्यतिबेला उनले यहाँ तीन दिन बिताएर हवाई मार्गबाट बाहिरिएका थिए। नेपाल भ्रमण गरेको एकसय आठौं दिनमा उनी ३३ वर्षीय ब्राजिलियन फरनन्दा मारिया आर ओर्डीजिउस डु नासीमेन्टोसँगै नेपाल आए।
प्रहरी बयानमा उनले फरनन्दा आफ्नो प्रेमिका रहेको उल्लेख गरेका छन्। फरनन्दाले नेपाल आउनुभन्दा १६ दिन अघिमात्र राहदानी लिएको देखिन्छ। १४ फेब्रुअरी २०१९ मा राहदानी लिएर उनी १ मार्च २०१९ मा नेपाल यात्रामा आएकी हुन्।
‘अघिल्ला घटनाहरूमा जस्तै उनी भरिया हुन् भन्ने उनको नयाँ राहदानीले समेत पुष्टि गर्छ’, एक जना अनुसन्धान अधिकारी भन्छन्, ‘ब्यूरोले अनुसन्धान गरिरहेको होला।’
दोहोरिएको अर्को घटना
ब्यूरोले नै अनुसन्धान र कारवाही गरेको २०७३ को एउटा घटनासँग अहिलेको घटना मेल खान्छ। त्यसबेला ब्यूरोले भारतीय समकक्षीको सहयोगमा नेपालमा भरिया पक्राउ गरेको थियो। भैरहवाको सुनौली नाकामा ३ किलो १ सय २५ ग्राम कोकिनसहित भारत मणिपुरकी रोज कासुङ पक्राउ परेकी थिइन्।
ब्यूरोको रेकर्डअनुसार भारतीय लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले ३२ साउन २०७३ मा कासुङलाई काठमाडौं–दिल्ली चल्ने बसबाट कोकिनसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनले बयानमा आफुलाई कोकिन काठमाडौंको होटल सिटीमा रहेकी एक अपरचित महिलाले दिएको खुलाएकी थिइन्। प्रहरीले घटनाको १० दिनपछि बोलिभियाकी टेओडोभिक गोन्जालेस पाओलोलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।
पाओलोका विषयमा समेत त्यतीबेला ब्यूरोलाई सूचना आएको थियो। तर ब्यूरो अधिकारी पुग्नु अघि नै उनले रोज कासुङलाई कोकिन डेलिभरी दिएकी थिइन्। उनलाई ८ भदौ २०७३ मा नियन्त्रणमा लिएको ब्यूरोले १२ भदौ २०७३ मा सार्वजनिक गरेको थियो। उनीसँग कोकिन बरामद नभए पनि कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा चलेको थियो।
दाउद इब्राहिम र छोटा राजनसम्मको संलग्नता
ब्यूरोले २०६८ देखि २०७४ सम्म करिब ३८ किलो कोकिन बरामद गरेको छ। घटनामा २१ जना विदेशी र एकजना नेपाली पक्राउ परेका छन्। यी मध्ये अधिकांश घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालबाट आएको सूचनाका आधारमा ब्यूरो सक्रिय भएको थियो।
नेपाल आउने कोकिन तस्करीको घटनामा अण्डरवल्र्ड डन दाउद इब्राहिम र उनका परस्पर बिरोधी छोटा राजनसम्मको संलग्नता ब्यूरोकै अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ। पहिला कोकिन नेपाल ट्रान्जिट भएर युरोप र अमेरिका जाने भए पनि पछिल्लो समय हङकङ र चीनसम्म पुग्ने गरेको ब्यूरो अनुसन्धानले देखाएका छन्।
जिम्मेवार प्रहरी अधिकारी सजग नहुँदा यो पटक कोकिन फुत्किएको धेरैको बुझाइ छ। लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको कोकिन बरामद अप्रेसन असफल हुँदा त्यसले धेरै प्रश्न उब्जिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणालीमा पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ।
प्रकाशित १९ बैशाख २०७६, बिहिबार | 2019-05-02 22:23:29